ရန်ကုန် (၄၈)လမ်း ဆွဒကီယာကျောင်း မီးရှို့ခံရမှု သုံးသပ်ချက် (Mohammed Bilar Hap) | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ရန်ကုန် (၄၈)လမ်း ဆွဒကီယာကျောင်း မီးရှို့ခံရမှု သုံးသပ်ချက် (Mohammed Bilar Hap)
၁။ ကျောင်းသားများ၏ အင်္ကျီများတွင် တာပင်တိုင် (သို့မဟုတ်) ရေနံဆီဟု ယူဆရသောဆီများ စိုရွှဲနေခြင်း
မီးလောင်သည်ကို သိသည်နှင့် ထပြေးသော ကျောင်းသားများ ဆီချော်၍လဲခြင်း။
မီးငြိမ်းသတ်ရန် ရေပုံးယူသော ဆရာ ဆီနင်းမိ၍ချော်လဲခြင်း။
မီးသတ်ရန် သွားသူများရော၊ အလောင်းဆွဲထုတ်သူများ၏ လက်များနှင့် အ၀တ်အစားများတွင် ဆီများပေကျံခြင်း။
မီးလောင်မှုပြီးဆုံးပြီး လက်များကို စင်အောင်ဆေးပြီးသည့်နောက်တွင်လည်း တာပင်တိုင်အနံ့များ ရနေခြင်း။ (ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လက်ကိုနမ်းခဲ့ရာ ထိုကဲ့သို့အနံ့ရနေပါသည်။) ရန်ကုန်ရှိလူများသည် ရေနံဆီမသုံးကြပါ။ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်၊ အောက်တိန်း၊ ဂက်စ်တို့ကိုသာ သိပါသည်။
ကျနော် တောမှာနေဖူး၍ ရေနံဆီအနံ့ကို သိပါသည်။
၃။ မီးသတ်ကားများ အစီး ၂၀ ခန့် လာသော်လည်း မီးသတ်ဥသြမဆွဲခြင်း (ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လာငြိမ်းခြင်း) (မင်္ဂလာဈေးမီးလောင်စဉ်က တစ်ညလုံး မီးလောင်နေရာ ဥသြသံများ အဆက်မပြတ် ကြားနေခဲ့ရသည်။) မီးသတ်ကားတွေ့သူများက လိုက်သွား၍ သိရခြင်း။
၄။ ကျောင်း၏လျှပ်စစ်ဝိုင်ယာကြိုးများတွင် မည်သည့် ညှော်နံ့မှမရှိခြင်း။ ရဲက ကျောင်းတွင် အသုံးပြုသော မီးအားမြှင့်စက် (Transformer) ကို သိမ်းဆည်းသွားခြင်း။
၅။ RFA သတင်းထောက်က သတင်းရယူရာတွင် မီးလောင်မှုနှင့် မီးငြိမ်းသတ်မှု ဖြစ်စဉ်များကို မေးမြန်းနေစဉ် မီးငြိမ်းသတ်သော ဆရာက မိမိ၏အ၀တ်အစားများတွင် ဆီများပေနေကြောင်းနှင့် ဆီများမှာ အနံ့ပင် မပျောက်သေးကြောင်း ပြောသဖြင့် သတင်းထောက်ကိုယ်တိုင် လက်ကို နမ်းကြည့်လိုက်သော်လည်း ထိုအချိန်တွင် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုကို ရပ်တန့်လိုက်ခြင်း။ Eleven Media က သတင်းထုတ်ပြန်ရာတွင် ထို ဆီကိစ္စလုံးဝမပါရှိခြင်း။
အထပ်ခိုးထဲတွင် ကျောင်းသားများ ရှိနေသေးသည်ဟု ပြောသော်လည်း မီးသတ်သမားများက သေသူမရှိဟု တွင်တွင်ငြင်းခြင်း။
ရပ်ကွက်သားက မီးလောင်သေဆုံးနေသော ကျောင်းသားများကို ကိုယ်တိုင် အထပ်ခိုးပေါ်သို့ တက်ရောက်သွားသောအခါမှ မီးလောင်သေဆုံးထားသော ကျောင်းသားများကို ထပ်မံဆွဲထုတ်နိုင်ခြင်း။
၇။ ကျောင်းရှေ့တွင် ဂျစ်ကားတစ်စီးရပ်ထားရာ လာ၍ မောင်းယူမည့်သူ မရှိသဖြင့် လူအင်အားဖြင့်ရွှေ့လိုက်ရခြင်း။
၈။ အခင်းမဖြစ်ပွားမီ ပေါက်ကွဲသံ ကြားရခြင်း။
၉။ ၀ါယာရှော့ကြောင့် လောင်တာဟူသော သတင်းသည် တစ်မုဟုတ်ချင်းပျံ့နှံ့သွားခြင်း။
၁၀ ။ ၀ါယာရှော့ကြောင့်လောင်လျှင် အဘယ့်ကြောင့် ရေနံဆီများ ရောက်လာသနည်း? ရေနံဆီသုံး မီးစက်ရှိပါသလော? ၀ါယာညှော်နံ့ကို ဘေးရှိအိမ်များက မရလေသလော?
အထက်ပါအကြောင်းများကြောင့် သာမန်မီးလောင်မှုမဟုတ်ဘဲ ရှို့မီးဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ရပေသည်။
Mohammed Bilar Hap
This entry was posted on April 2, 2013, in အထူးကဏ္ဍ, ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← Photo News: မီးလောင်ကျွမ်းမှုမှာသွေးရိုးသားရိုး ဖြစ်စဉ်မဟုတ်၊အစိုးရမှဖော်ထုတ်ပေးရန် PCN အဖွဲ့မှ(၈၈)မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုထွန်းကြည်မှ မီဒီယာများသို့ ပြော .. ..	ရန်ကုန်ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊၄၈လမ်းရှိဆွဒီကီယာ ဟာဖိဇ် အာဂုံဆောင်ကျောင်း မီးရှို့ခံရ ကြောင်းဝေ ဖန်ချက် … →